Mass Ahịa na nkeonwe | Martech Zone
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-agụ ọrụ m, ị mara na m bụ onye mmegide nke vesos ntụnyere na ahịa. Ọ na-abụkarị, dị ka ọ dị n'ihe banyere ịhazi mmadụ, ọ bụghị nhọrọ nke usoro ị ga-eji, kama mgbe ị ga-eji usoro ọ bụla. E nwere ụfọdụ asusu n'eziokwu na nke a infographic bụ ire ahịa… Mana na-akwagide maka nnabata mma. Ha abụọ na-arụ ọrụ nke ọma mgbe ha na-eme leverage nke ọma.
N'otu oge, ahịa niile bụ nke onwe. Onye na-ere ahịa site n'ọnụ ụzọ ruo n'ọnụ ụzọ, onye na-agba ego n'ụlọ akụ, na onye na-egbu ihe mara ha niile ma aha ha. E bipụtara akwụkwọ ozi dị iche iche na nsụgharị dị iche iche iji rịọ maka ọdịdị ma ọ bụ mmasị ndị ahịa. Mgbe ahụ, na mmalite nke email na weebụsaịtị, ndị na-ere ahịa malitere ịdabere na usoro ịzụ ahịa ahịa iji zipu otu ozi n'ofe ọwa dijitalụ ọhụrụ. Site na Monetate Infographic Mass Marketing na nkeonwe
Lelee ihe omuma a ma jide n'aka na ibudata Monetate's ebook, The Eziokwu nke Nhazi N'ịntanetị. Emeputara na mmekorita ya na Econsultancy, nyocha ha na-achoputa ihe na-acho nleba anya na ntaneti, uzo na udiri data nke eji eme ka ndi mmadu nweta ihe omuma na ihe ndi ozo.
Tags: ahia ahiamonetatenhazi nke intanetikeonwe
Sdị, Agba na Mmetụta
Mee 8, 2013 na 5: 47 PM
Mgbe ụlọ ọrụ na-eji mmadụ mgbasa ozi, ịhazi onwe ya ga-abụ ihe kacha mkpa. Mgbasa mgbasa ozi bụ banyere njikọ aka na mmadụ na onye ọzọ. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ anaghị anwa iso ndị na-azụ ahịa, mgbe ahụ ha ga-atụfu ha.